Xildhibaano hore oo muqdisho lagu dhaawacay. – Shabakadda Amiirnuur
January 23, 2021 1:43 pm by admin Views: 39
laba xildhibaan oo hore ayaa Maanta lagu dhaawacay qarax ka dhacay Degmada Kaaraan ee Magaalada Muqdisho.
Muxudiin Xasan Afrax iyo iyo Xuseen Caraale oo laabduba horay xilal Xildhibaanimo u soo xabtay ayaa la sheegay in isbitaal loola cararray kadib markii ay ku dhaawacmeen qarax gaari ay saarnaayeen lala beegsaday.
waxaa Qaraxa ku geeriyooday Afar ka tirsan ilaalada Muxudiin Xasan Afrax kuwaasoo meydadkooda goobta laga qaaday.
Gaariga la qarxiyay oo sawir laga qaaday waxaa ka muuqda dhiigga dadkii qaraxuhu haleelay oo si weyn loo arki karo.
sida muuqata bartilaameedku wuxuu ahaa Muxudiin Xasan Afrax oo waqti aan sidaas u sii fogeyn ka bad baaday qarax ay la beegsaday Xarakada Shababaul Mujaahdiin sida muuqatana qaraxa maantana Xarkada ayaa ka dambeysa.
Gudoomiyaha Degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud (Abshir Kaaraan) oo ku guul dareystay in uu xaqiiiyo Amniga Degmada Kaaraan ayaa durbhadiiba soo horjoogsaday warbaahinta waxa uuna bilaabay in uu habaaramo asigoo inkaaraya Xarakada SHabaabul Mujaahidiin.
Alshabaab ayaa Dowladda Federaalka ah ku qasbatya in xubnahoodi meelo kooban ku sugnaadaan kuwa dhaq dhaqaaq isku dayana waxay la beegsadaa qaraxyo welow ay xusid mudan thaay in ay xubno badan ugu tagtay goobaha lagu ilalainayo kuna dishay.